जलवायु परिवर्तनको प्रभाव « Koralapost
काेराेला पोस्ट पुस २३, २०७८ शुक्रबार
सुदूरविगतमा पनि शीतलहर चल्ने गथर््यो तर यदाकदा मात्र । तराईका बूढापाका शीतलहरका आधारमा आफ्ना र केटाकेटीका उमेर मापन गर्थे । समयको कालक्रम खुट्याउँथे । शीतलहर उनका लागि स्मरणीय बन्ने गरेको थियो तर अहिले समय फेरिएको छ । शीतलहरलाई नियतिका रूपमा हेर्न थालिएको छ । मौसम र जलवायु पनि फेरिएको छ । अहिलेका पुस्ताका लागि शीतलहर नहुँदाको वर्ष स्मरणीय बन्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना भएको छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त ? यस्तो अवस्थाको विद्यमानताका लागि को जिम्मेवार हो ? यसको उत्तर खोज्ने कार्य सहज छैन । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा त यसको उत्तर खोज्ने यथोचित प्रयास पनि भएको पाइएको छैन । नेपालमा यससम्बन्धी बहस पनि चल्न सकेको छैन । समस्या तराईमा मात्र होइन पहाड र हिमालमा पनि छ । कहीँ अस्वाभाविक रूपमा हिउँ पर्ने गरेको छ भने कतै हिउँ पग्लेर हिमालका नाङ्गा चट्टान त्यत्तिकै देखिइने स्थितिको पनि निर्माण भएको छ । कारणको खोजी गर्दै जाउँ, किन यस्तो भइरहेको छ ? कारण खोज्न सकिए समाधान पनि खोज्न सकिएला । यस्तो अवस्थामा एउटा कुरा के सत्य हो भने पछिल्ला केही वर्षयता चिसो छल्न पहाडबाट तराई ओर्लने नभई तराईबाट पहाड उक्लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो प्रवृत्ति स्वयंंमा महत्वपूर्ण छ ।
साभार गोरखापत्र अनलाईनबाट ।
१८ औं अन्तर मा.वि. लोकनृत्य प्रतियोगितामा न्यु वेष्ट..